खुसी कहाँ र कसरी भेटिन्छ ? जान्रुहाेस् - ज्ञानविज्ञान
भाैतिक सुविधाहरूले जिवनशैलीलाइ सहज बनाएता पनि मानिस दिन प्रति दिन खुसी देखी टाढा गइरहेकाे छ । खुसी खाेज्नकै लागी चलिरहेकाे अस्तव्पस्त दैनिकिमा मानिसले आफुलाइ नै बिर्सी रहेकाे छ । तर खुसी त आफु भित्र नै हुन्छ ।
खुसी यसरी भेटिन्छ ?
अरूले तपाइबाट के चाहान्छन् हाेइन, तपाइले आफ्नाे लागी के चाहानुहुन्छ, साेच्नुहाेस् । आफुलाइ प्राथमिकतामा राख्न सिक्नुहाेस् । अरूकाे लागी हाेइन, पहिले आफ्नाे लागी बाँच्नुहाेस् । अनिमात्र तपाइ अरूकाे लागी बाच्न सक्नुहुनुहुन्छ । अरूकाे खुसी हेरेर तपाइले आफ्नाे मनलाइ मार्नुभयाे भने, त्यसले तपाइकाे जिवनमा दिर्घकालीन खुसी दिदैन ।
मुस्कुराउनुहाेस् । बालबालिकासँग खेल्ने, बगैँचामा गएर फुलहरू स्पर्श गर्ने गर्नुहाेस् । बिहानमा प्राकृतिक दृश्यलाइ नियाल्नुहाेस् । खुसी यिनै स-साना कुरामा लुकेकाे हुन्छ । खुलेर रमाउन सिक्नुहाेस् । मानिसकाे जमघटमा सँगीत र नाच चलेकाे छ भने बेप्रवहा नाच्नुहाेस् ।
चाडपर्वलाइ उत्सवकाे रूपमा मनाउनुहाेस् । आफ्नाे जन्म दिन लगायतका विशेष दिनकाे मिती याद गर्ने गर्नुहाेस् र ति दिनलाइ विशेष किसिमले मनाउनुहाेस् । खेल्नुहाेस्, गित गाउनुहाेस्, रमाइला चलचित्र हेरेर मज्जाले हाँस्नुहाेस् । अरूले के भन्लान भन्रे साेचेर आफ्नाे मनलाइ नखुम्च्याउनुहाेस् ।
बिहान उठिसकेपछी आफ्नाे काेठा सफा गर्ने, चट्ट मिलाउने, अाफु पनि फ्रेस हुने, पानी पिउने गर्नुहाेस् । घरकाे काममा सघाउने, परिवारसँग केही छिन् सँगै बसेर गफ गर्ने गर्नुहाेस् । सुन्दा सामान्य लाग्ने यि कुराले तपाइकाे दैनिकीमा, तपाइकाे जिवनमा धेरै ठुलाे फरक ल्याउनेछन् ।
कुरा गरेर या करैकाे आलाेचना गरेर बस्नुभन्दा त्याे आलाेचना या विचारलाइ आफैले काममा बदल्नुहाेस् । यसले तपाइमा काम गर्ने उत्साह, विचारहरूकाे प्रवाह, आत्मसम्मान ल्याउँछ जसले गर्दा तपाइकाे जिवनमा खुसी छाउँछ । धेरै साेच्ने बानीले मानिसमा तरङ्ग आउनुकाे साथै खुसी पनि हराउँछ ।
यसकाे उपचार भनेकाे आफुले साेचेका कुरा डायरीमा लेख्नु पनि हाे । त्यसरी लेख्दा आफ्नाे मन हलुका पनि हुन्छ । त्यस्तै, कामकाे व्यस्त दैनिकीबाट आफ्नाे लागी पनि समय निकाल्नुहाेस् । अफ्ठ्याराे परिस्थिति, आफ्नाे नमिठाे विगतलाइ जिवनमा केही हासिल गर्ने प्रेरणाकाे रूपमा लिनुहाेस् ।
सम्झनुहाेस्, सबैभन्दा ठुलाे बदला भनेकाे खुसी रहनु र अगाडी बढी रहनु हाे । आफुलाइ आफैले आत्मसात गर्न र सम्मान गर्न सिक्नुहाेस् । अरू व्याक्तिहरूसँग आफुलाइ तुलना नगर्नुहाेस् । तपाइ जस्ताे हुनुहुन्छ, विशेष हुनुहुन्छ । तपाइ अरूभन्दा फरक हुनुहुन्छ, जसरी अरू तपाइ भन्दा फरक छन् ।
वास्तवमा हामी मेरा कारणले यो धर्तीमा सकारात्मक प्रभाव परोस् भन्ने चाहन्छाँै । यही सकारात्मकताले जीवनमा ठूलो यात्रा गर्न सकिन्छ । तर, हामी वेलावेलामा जीवनलाई अनिश्चितताको खाडलमा लाने काम गर्छौैं । जीवनलाई जे बनाउनु छ, सबै आफ्नै हातमा हुन्छ । तपाईं जीवनमा ठ्याक्कै के चाहनुहुन्छ ? तपाईंले खोजेको कुराले के दिन्छ ? त्यसले तपाईंको जीवनमा खुसी दिन्छ वा दिँदैन ? यी सबैभन्दा महत्वपूर्ण छन् र यी कुराले तपाईंको जीवनमा ठूलो प्रभाव राख्छन् । यस्तो कुरा खोज्नुहोस् जसले जीवनमा सन्तुष्टि प्रदान गरोस्
Don't Miss it कसरी बढाउन सकिन्छ आफ्नाे इच्छाशक्तिलाइ ? जान्नुहाेस्
Up Next तपाइकाे कतै दिउँसै सपना देख्ने बानी त छैन ? यस्ता छन् फाइदै फाइदा